Ibhokisi Elikhanyayo, Izimpawu Zokuthengisa Nebhodi Yezimpawu, Izinhlamvu Ezikhanyayo Eziholwa - Zhengcheng
Umsuka wamabhokisi wokukhanya wokukhangisa ungalandelwa emuva ngawo-1970, ekuqaleni kweNyakatho Melika, futhi kamuva naseYurophu. Uma kuqhathaniswa neNyakatho Melika neYurophu, umkhakha webhokisi elikhanyayo waseChina uqale sekwedlule isikhathi, futhi kusengumboni osafufusa ...
Ibhokisi lokukhanya le-blister liyibhodi lezimpawu nophawu lwesitolo, olumele isithombe salo. Ngakho-ke, umklamo uzogqamisa izinzuzo zesitolo uqobo. Umsebenzi webhokisi lokukhanya elingaphambili yisikhangiso sebhokisi lokukhanya, futhi inoveli yebhokisi lokukhanya eliyingqayizivele ...
Sinamathela esimisweni sokwethembeka ekubambisaneni kwethu, ukubambisana kwethu kuzoba umphumela wokuwina.
Umkhiqizi wezimpawu zangaphambili zezitolo
Nikeza ngezinsizakalo zokukhiqiza izimpawu ezingaphambili zezitolo zemikhiqizo engaphezu kwekhulu e-Asia.
Ukugqama komkhiqizo okuvelele, ukukhiqizwa kwe-modular, ukufakwa okulula, ukugcinwa okulula, i-100% engenamanzi.
Sizoxazulula izinkinga zamakhasimende ngenkuthalo, sicabangele izidingo zabo zangempela, futhi sinikeze amakhasimende izixazululo zebhodi elingcono kakhulu.
Sigxila emisha yomkhiqizo, futhi siphishekela njalo ikhwalithi yomkhiqizo, kuphela ukukunikeza imikhiqizo ehamba phambili.
Vumela uZhengcheng aye emhlabeni, wazise umhlaba ngoZhengcheng
ISichuan Zhengcheng Starlight Energy Saving Technology Co, Ltd. yasungulwa ngoNovemba 2013. Kungumkhiqizi oqeqeshiwe wezimpawu zasendlini nangaphandle namabhodi wezitolo ezidayisa ukudla okulula, izitolo ezinkulu, amakhemisi amaketanga, izindawo zokudlela zokudla okusheshayo, amabhange, amagalaji kaphethiloli, njll. …
Izimpawu Ezikhanyisiwe, I-Blister Light Box Signboard, I-Pharmacy Signboard, Umshini Owenza Ibhokisi Elikhanyayo Lebhodi Lesibonakaliso, Ibhodi lokungena elingaphandle le-Light Light, Izimpawu Zokukhangisa,